लिङ्गको आकार एक हप्ता मै ठुलो बनाउने सरल तरिका « News of Nepal
सामान्यतः उत्तेजित अवस्थामा लिंगको सालाखाला लम्बाइ यस्तै १५ सेन्टिमिटर हुन्छ। धेरैजसो व्यक्तिको लिङ्गको लम्बाइ १३ देखि १६ दशमलव ५ सेन्टिमिटरभित्र परे पनि यस्तै ७ प्रतिशतजति व्यक्तिको लिङ्ग ११ सेमीको हाराहारीमा हुने एक अध्ययनले देखाएको छ।
यदी साँच्ची नै तपाईं लिङगको आकार सानो हो र बढाउन चाहनु हुन्छ भने तलका स्टेप अपनाउन सक्नु हुन्छ
२. तौल वा यन्त्रको सहायताले तन्काउने विधि ः कुनै वजनदार वस्तु लिङ्गमा झुन्डयाई वा screw-extender भएको यन्त्रले लिङ्गको साइज बढाउन सकिन्छ। कतिपयले यस्ता विधिले अनावश्यक रुपमा लिङ्गमा चोटपुग्ने कुरामा सजग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
४. शल्यक्रियाः यो विधिमा लिङ्गलाई अडयाउने तन्तु (suspensary ligament) काट्ने, बोसो (fat) तन्तु भर्ने वा graft गर्ने वा अन्य वस्तु राख्ने (प्रत्यारोपण) गर्नेजस्ता अनेक उपाय गरिन्छ। यस्तो शल्यक्रिया कुशल चिकित्सकवाट गरिनु आवश्यक छ।
यसका बाबजुद कतिपय स्थितिमा शल्यक्रिया गराउने व्यक्तिको आशाअनुरूप नतिजा नआएको कुरा पनि छ, जसले असन्तोषलाई थप्छ नै।